Even after getting the massive criticism, stubborn U Wirathu is not repentant | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Z to Z or Dr. Maung Zarni’s open letter to Ko Zargana
Most of the Myanmar political leaders and citizens are racists and most of them wish for democracy but deny the EQUAL RIGHTS of all the minorities »
Even after getting the massive criticism, stubborn U Wirathu is not repentant
Even after getting the massive criticism, stubborn U Wirathu is not repentant.
မြတ်စွာဘုရားပင်လျှင် လုိုအပ်လျှင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း သုံးစွဲလေ့ရှိကြောင်းနှင့် မိမိစကားကြောင့် သံဃာ့ပုံရိပ်မထိခိုက်နိင်ဟု မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော်မိန့်ကြား
ဟိန်းအောင် ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၅
မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း လိုအပ်လျှင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသုံးစွဲခဲ့ခြင်းရှိသဖြင့် မိမိဟောပြောချက်ကြောင့် သံဃာ့ပုံရိပ်ထိခိုက်နိင်ခြင်းမရှိဟု မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော် ဦးဝီရသူက ဘီဘီစီ သတင်းဌာနသို့မိန့်ကြားလိုက်သည်။
“ဒီလိုသုံးနှုန်း တာကတော့ မြတ်စွာဘုရားလဲ လိုအပ်ရင်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းသုံးစွဲတာတွေရှိပါတယ်။အဲဒီ့အတွက်ကတော့မပူပါနဲ့ တော့ မထိခိုက်ပါဘူး”ဟု ဦးဝီရသူက ဘီဘီစီသတင်းဌာနသို့မိန့်သည်။
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စယန်ဟီးလီအား ဖာသည်မ ဟု စင်မြင့်ထက်မှ ဆဲရေးတုိုင်းထွာခဲ့သည့် ဦးဝီရသူပြောကြားချက်ကြောင့် အခြားသံဃာတွေများပုံရိပ်ထိခိုက်နိင်မှုရှိမရှိ ဘီဘီစီသတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကို ဦးဝီရသူက အဆုိုပါဟောပြောချက်သည် တရားဟောစင်မြင့်ထက်မှဟောပြောခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊စင်မြင့်ထက်ကပြောခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း၊နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဟောနေတုန်းပြောဆိုတာမဟုတ်သလုို အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် ဟောပြောနေချိန်ဟောပြောချက်ဖြစ်ကြောင်းအပြင် မြတ်စွာဘုရားလည်းလုိုအပ်ရင်ကြမ်းကြမ်းဟောကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်းဌာနတုို့ မိန့်ကြားခဲ့သည်။
ထုို့အပြင်ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်မျိုးနောက်နောင်မဖြစ်ပွားစေရန် မိမိအနေဖြင့် ဆင်ခြင်စရာမလုိုကြောင်း မိမိကကျူးလွန်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းလည်း ဦးဝီရသူက ဘီဘီစီသတင်းဌာနသို့ ထပ်ဆင့်မိန့်ကြားသည်။
“ဦးဇင်းကကျူးလွန်တာမှမဟုတ်ဘဲ၊ဒကာကြီးကလဲ ဆင်ခြင်ရအောင်လေ။ကျူးလွန်လာတဲ့သူ ကိုတုန့်ပြန်တာပဲရှိတယ်လေ။အဲဒီတော့ ဦးဇင်းတုို့နိင်ငံကိုဘယ်သူမှမစော်ကားတော့ဘူးလို့ ကုလသမ္မဂက ဂတိပေးမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတုို့လည်း ပြောစရာမလိုတော့ဘူးလေနော်”ဟု ဦးဝီရသူက အထက်ပါသတင်းဌာနသို့ မိန့်သည်။
ထို့အပြင် မိမိ၏ ပြောဆိုချက်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး သံဃာမဟာနာယက ဆရာတော်များအနေဖြင့်မိမိအားတစ်စုံတစ်ရာပြောဆိုဝေဖန်ခြင်းလည်းမရှိကြောင်း မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော် ဦးဝီရသူက အထက်ပါသတင်းရင်းမြစ်သုို့ဆက်လက်မိန့်ကြားထားသည်။
အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေး(မဘသ)အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ဆရာတော်လည်းဖြစ်၊မန္တလေးမစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဆရာတော်ဦးဝီရသူသည် ကုလကိုယ်စားလှယ် မစ္စစ်ဟန်ဟီးလီ အား “ဖာသည်မ”ဟု သုံးနှုန်းဆဲဆိုရခြင်းကုိုပင် အားမရနိင်ကြောင်းနှင့် ထိုစကားလုံးထက်ပြင်းထန်သည့်စကားလုံးကိုသုံးစွဲလိုသည်ဟုလည်းကောင်း၊ မိမိ၏မွန်မြတ်သည့်စေတနာဖြင့်ဆဲဆုိုမှုကို မြတ်စွာဘုရားရှင်နားလည်ခွင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟုလည်းကောင်း မီဒီယာများသုို့မိန့်ကြားထားသည်။
ဗုဒ္ဓသားတော်သံဃာတော်တစ်ပါးလိုက်နာအပ်သည့်သိက္ခာပုဒ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်ပြောဆိုချက်များကြောင့် ရေနံချောင်းမြို့ဒေသခံအချို့ကလည်း ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့က ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ဟောကြားသည့်တရားပွဲအပြီးတွင် မကောင်းဆိုးရွားနှင်နည်းအတုိုင်း သံပုံးတီးတောထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
This entry was posted on January 23, 2015 at 9:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
7 Responses to “Even after getting the massive criticism, stubborn U Wirathu is not repentant”
January 24, 2015 at 8:22 am | Reply
မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ဦးဝီရသူက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင် ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် အပေါ် ရိုင်းပြကြမ်းတမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းကြည့်မယ် လို့ မြန်မာ အစိုးရဘက်က ပြောဆိုကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ အရေးယူ လို့တော့ ရနိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်း အရိပ် အမြွက်ပြောဆိုကြောင်း AFP သတင်းက ဖော်ပြပါတယ်။
သမ္မတရုံးပြောခွင့်ရသူ ဦးဇော်ဌေးက ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းဖို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကို ညွှန် ကြားထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ် တရားဝင် တိုင်တန်းချက် မရရှိသေးပါဘူး၊ ပြီးတော့ ဒီကိစ္စဟာ သံဃာ့ကိစ္စဖြစ်နေတာမို့၊ မိမိတို့အနေနဲ့ တိုက်ရိုက်ကိုင် တွယ်လို့ မရပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်း AFP သတင်းက ဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီ ကို ဦးဝီရသူက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရတွေသုံးစွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ဦးဝီရသူကို AFP က မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဦးဝီရသူက ဒီ့ထက်ပြင်းထန်တဲ့ ဝေါဟာရ စကားလုံးရှာတွေ့ရင်၊ အဲဒီ့ အတိုင်းပြောလိုက်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာပြည်အပေါ် မစ္စရန်ဟီးလီ လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ညီမျှတဲ့စကားလုံးမရှိကြောင်း တုန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့လည်း ဖော်ပြပါတယ်။
RFA (မြန်မာပိုင်း) မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
January 24, 2015 at 10:04 am | Reply
ဦးဝီရသူကို ခုလို ဆက်ခွင့်ပြုထားရင် ဘာဖြစ်လာနိုင်မလဲ
အခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာအနွယ်ဝင် သူတော်စင်အပေါင်းကို စိတ်ညစ်ညူးသွားစေတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ အမျိုးဘာသာသာသနာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ (မဘသ) ခေါင်းဆောင် မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော် အရှင်ဝီရသူက ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာရေးသူ မစ္စရန်ဟီလီ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးတွေကို ရိုင်းပြတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ဆဲဆိုလိုက်ခြင်းပါပဲ။
ဆန္ဒပြလူထု အစည်းအဝေးပွဲကြီးမှာ ခုလိုဆဲဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပြီး အဲလိုဆဲဆိုထားတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်ဟာ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေမှာလည်း အလွန်ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ခုဆိုရင် နိုင်ငံတကာသတင်း စာမျက်နှာတွေမှာ ဦးဝီရသူက အဲလိုညစ်ညမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဆဲဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပျံ့နှံ့သွားပါပြီ။ ဦးဝီရသူ ပြောဆိုလိုက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပုံရိပ် ထိခိုက်သွားသလား၊ နိုင်ငံ့ပုံရိပ် ထိခိုက်သွားသလား၊ ဒီပြဿနာမရှင်းရင် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
ဦးဝီရသူ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ စကားအပြည့်အစုံကတော့ “အမျိုးစောင့် ဥပဒေ ဒီလောက်ချပြထားတာ ဒီကောင်မက တစ်ခုမှ မလေ့လာဘဲနဲ့ ဟိုစွာကျယ်မတွေ တင်ပြတာနဲ့တင် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မညီဘူးဆိုပြီးတော့ လိုက်ကန့်ကွက်နေတဲ့ ကောင်မရော အမျိုးကောင်း သမီးဟုတ်ပါ့မလား။ ကုလသမဂ္ဂ ထိုင်ခုံပေါ်မှာ ရောက်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လူကြီးလူကောင်းလို့ အောက်မေ့မနေနဲ့။ ခင်ဗျားဟာကျုပ်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ -ာ သယ်မပဲဗျ။ ခင်ဗျား စိတ်ပါလို့ခင်ဗျား ကုလားကို -င် ပေးပါ။ ကျုပ်တို့ ရခိုင်ပြည်ကိုတော့ခင်ဗျား ရောင်းစားမယ် မလုပ်ပါနဲ့။ ရခိုင်ပြည်ဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့ခံတပ်ကြီး။ ရခိုင်ပြည်ဟာ ကျုပ်တို့ရဲ့ အနောက်တံခါးဝ၊ တံခါးကို ခင်ဗျားတို့ ဝင်ရောက်ချိုးဖျက်မယ် မကြံပါနဲ့။ ချိုးဖျက်ရင်တော့ ထိုးနှက်ပစ်မှာ” ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စဉ်းစားဖို့လိုတာက အေးချမ်းပါတယ်၊ မေတ္တာတရား လက်ကိုင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးက ခုလို ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားပြောဖို့ သင့်မသင့်ပါ။ အခုဆိုရင်ဒီသတင်း၊ သတင်းစာဂျာနယ်တွေမှာ အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြနေကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်တွေကတော့ အဲဒီလိုရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းတာ မပြောသင့်တဲ့အကြောင်း၊ ရဟန်းဝိနည်းနဲ့ မညီတဲ့အကြောင်း၊ သံဃာတော်တွေ စောင့်ထိန်းရမယ့် သိက္ခာပုဒ်၂၂၇ သွယ်ထဲမှာပါတဲ့ ဒုက္ကဋ္ဌ အာပတ်သင့်တဲ့အကြောင်း စသဖြင့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားကြပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးဝီရသူ ကိုယ်တိုင်ကတော့ သူ့အနေနဲ့ အဲဒီထက် ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံး ရှိရင်တောင် ပြောချင်တဲ့အကြောင်း ဆိုလိုက်ပြီး သူပြောခဲ့တာ မှန်တယ်လို့ ကာကွယ်လိုက်ပါသေးတယ်။
ဦးဝီရသူဟာ ရိုးရိုးရဟန်း တစ်ပါးမဟုတ်ဘဲ မဘသ ခေါင်းဆောင်သံဃာလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပြောဆိုချက်တွေဟာ မဘသ အဖွဲ့ကြီးကိုလည်း ထိခိုက်မှာ အသေအချာပါပဲ။ အခုဆိုရင် အဲဒီသတင်း နိုင်ငံတကာသတင်း စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေပြီမို့ မဘသဆိုတဲ့ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပုံရိပ်၊ ရဟန်းသံဃာတွေရဲ့ ပုံရိပ်ကို စွန်းထင်းစေခဲ့ပါပြီ။ တကယ်တော့ အခုလို ရင့်သီးတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ဆဲရေးမှု မလုပ်ခင်ကတည်းက ဦးဝီရသူဟာ အမုန်းတရား ဖြန့်ဖြူးနေသူပါ။ သူ့ကိုယ်ပိုင် Facebook စာမျက်နှာကနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ကျူးလွန်တယ်ဆိုတဲ့၊ တချို့စွပ်စွဲခံရတဲ့ အမှုတွေကို လိုက်လံစုံစမ်းဖော်ပြပြီး မွတ်စလင်တွေကို မုန်းတီးစိတ် ဖြစ်ပေါ်စေအောင် ဝါဒဖြန့်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ အဓိကရုဏ်းဟာလည်း တမင်လုပ်ကြံဖန်တီးလို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာဆိုပြီး မန္တလေးမြို့ခံတွေက ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အဲဒီ ပဋိပက္ခရဲ့ အစဖြစ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ပါတယ်ဆိုပြီး ပျဉ်းမနားမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ လူမသိသူမသိ ကိစ္စတစ်ခုကို အရှင်ဝီရသူက ပျဉ်းမနားမဘသအဖွဲ့ကို စုံစမ်းခိုင်း၊ အမှုနံပါတ်ရတဲ့အခါ Facebook ထဲကနေ ဖော်ပြပြီး၊ တကယ်ပဲ အဲဒီညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က မုဒိန်းမှု ကျူးလွန်ခဲ့ သယောင်ရေးသား၊ ဘာသာရေး မုန်းတီးမှုတွေ ဖြစ်အောင်စနစ်တကျ လှုံ့ဆော်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း တကယ်ပဲ မန္တလေးမှာ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆန်တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားပြီး လူနှစ်ယောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
အရှင်ဝီရသူရဲ့အဲဒီအမုန်းတရား ဖြန့်ဖြူးမှုလုပ်တာ၊ အကြမ်းဖက်ဖို့ လှုံ့ဆော်တာတွေကို Facebook စာမျက်နှာတွေမှာတင်မက သတင်းစာ ဂျာနယ်တွေရဲ့ တရားဝင် စာမျက်နှာတွေမှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဏာပိုင်တွေဟာ အခြားသူတွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဦးဝီရသူကိုတော့ တစ်စုံတစ်ရာစုံစမ်းမေး မြန်းတာမျိုးတောင် မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရင် နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂလို အဖွဲ့ကြီးရဲ့ဂုဏ်သရေရှိ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောင် ကမ္ဘာသိ ဆဲပြခဲ့ပါပြီ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးစရာရှိတာက မြန်မာနိုင်ငံက သံဃအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကို ခွင့်ပြုထားသလား ဆိုတာပါ။ သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်ကတော့ ဒါမျိုးလာတိုင်ရင် အရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ ပြဿနာကို ရှောင်လွှဲသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဦးဝီရသူရဲ့ ဟောပြောချက် ဗီဒီယိုဖိုင် အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေထက်မှာ အလွန့်အလွန်ပျံ့နှံ့သွားပြီမို့ အာဏာပိုင်တွေ သိရှိပြီးကြပါပြီ။
အမုန်းတရား ဖြန့်ဖြူးနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လိုမျိုးက အရေးမယူတာကိုလည်း စဉ်းစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ သာမန် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ကြည့်ရင်တောင် ဦးဝီရသူဟာ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆန့်ကျင်သူ၊ အင်န်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သူဖြစ်ကြောင်း သိကြပါတယ်။ အခုဆန္ဒပြပွဲ ပြောဆိုချက်မှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရည်ရွယ်ပြီး ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ပြောထားတာမျိုး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဦးဝီရသူအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီကို ဆန့်ကျင်သူမို့လို့ ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ အမုန်းတရား ဖြန့်ဖြူးနေတာတွေကို ခုလိုပဲ လျစ်လျူရှုထားဦးမယ်ဆိုရင် နောင်ပိုပြီးဆိုးရွားတဲ့ ဘာသာရေး လူမျိုးရေးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာစရာရှိပါကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပုံရိပ်လည်း ဒီထက်ညှိုးနွမ်းဂုဏ်မဲ့စရာ ရှိပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
>>> မဇ္ဈိမ သတင်းစာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
January 24, 2015 at 10:10 am | Reply
President Thein Sein had already have given blanket-cover and full protection by declaring officially that Wirathu is the son of Buddha. This stupid words have SELF-INCRIMINATION effect and would putanoose around his neck at ICC. He would be guilty of charges on Omission of duty and Command Responsibility.
January 24, 2015 at 11:14 am | Reply
ဇန်န၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၅
ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်လာခဲ့သည့် မိသားစု တခုတွင် လူဖြစ်ခွင့် ရရှိခဲ့သော ကျမသည် အလိုလျှောက် မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တယောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
နယ်တွင်မွေးကာ နယ်တွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည့် ကျမသည် လူကြီးမိဘများနှင့် အတူနေရချိန်က ပိုများသည်။ ထို့ကြောင့် လူကြီးမိဘများ၏ ဘာသာရေး အဆုံးအမများကြားတွင် လူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဝါတွင်းကာလ ဥပုဒ်နေ့များတွင် ဖြစ်စေ၊ ဝါပကာလ လပြည့်လကွယ် ဥပုဒ်နေ့များ၌ ဖြစ်စေ လူကြီးမိဘများနှင့်အတူ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရသည်။ ဥပုဒ်သီလ ဆောက်တည်ရသည်။
ကျမတို့ နယ်မြို့ကလေးတွင် တန်ခိုးသြဇာ ကြီးမားသည့် ဆရာတော်ကြီးများ၏ တရားပွဲများတွင် ဓမ္မဒေသနာတော်များကို နာကြားရခြင်းသည် ရတောင့်ရခဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်။ ပါဠိဘာသာစကားများဖြင့် ဟောပြောသည့် တရားများကို နားမလည်သော်လည်း လူကြီးသူမများနှင့် ထိုတရားပွဲများသို့ သွားသည်။ တရားစခန်းဖွင့်လျှင် ကျမ တရားစခန်းဝင်သည်။
ဘာသာတရား၏ အနှစ်သာရကို ကိုယ်တိုင်ကျေကျညက်ညက် နားလည်အောင် လေ့လာပြီး ကိုးကွယ်ရခြင်း မဟုတ်သော်လည်း မိရိုးဖလာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကျမသည် အသက်အရွယ်နှင့် သိနားလည်သလောက် ဘာသာတရားကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းခဲ့သည်။
ဖန်ရည်ဆိုးထားသည့် သင်္ကန်းတော်များကို ဆင်မြန်းထားသည့် ဗုဒ္ဓ၏ သားတော်များအား ကျမတို့၏ မွန်မြတ်လှသော စားဦးစားဖွယ်များကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးများသည် အိမ်ဦးခန်းတွင် ထိုင်ကြရသည်။ မာတုကာမ ဟုခေါ်သည့် ကျမတို့ မိန်းကလေးများသည် ထိုဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် ကြမ်းတပြေးတည်း မထိုင်ရ။
လေသင့်ရာအရပ်တွင် မထိုင်ရ။ လမ်းမပေါ်တွင် ဆွမ်းခံကြွနေသည့် သံဃာတော်များကို တွေ့ရလျှင် ဖိနပ်ကလေးချွတ်၊ လမ်းဘေးသို့ ကပ်ခါ၊ သံဃာတော်များ၏ အရိပ်ကို မနင်းမိစေရန် ရှောင်ကျဉ်ရသည်။ ကိုယ်က စက်ဘီးပေါ်မှ ဖြစ်နေလျှင် စက်ဘီးကိုရပ်ကာ မြေကြီးသို့ ဆင်း၍ ဂါရဝတရား ထားခဲ့သည်။
သံဃာတော်များက ဆိုဆုံးမလျှင် မျက်နှာငုံ့ကာ နာခံခဲ့ရသည်။ သံဃာတော်များသည် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရာ သာမက လမ်းမှန်ရောက်အောင် ဆိုဆုံးမတတ်သော ဆရာသမားများအဖြစ် ချစ်ကြောက်ရိုသေခဲ့သည်။
စဉ်းစားတတ်သည့် အရွယ်ရောက်လာသည့်အခါ ဘုန်းတော်ကြီးများသည် လောကီရေးရာ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် သံသရာလည်နေရသည့် ကျမတို့လို သာမာန်လူသားများအတွက် ဘုရားရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်ဟု တွေးမိသည်။
ကျမတို့ မလုပ်နိုင်သည့် ဆံကို ပယ်ခြင်း၊ မွန်းလွှဲညစာ မသုံးဆောင်ခြင်း၊ အပွင့်အခက် အပျောက်အမွန်းများ မပါသည့် ဖန်ရည်ဆိုး သင်္ကန်းများကိုသာ ဆင်မြန်းခြင်း စသည့် ရောင့်ရဲခြင်း တရားများအပြင် လူအများ မလုပ်နိုင်သည့် ကျင့်ဝတ် သိက္ခာပုဒ်များကို လက်ကိုင်ထားကြသူများဖြစ်၍ ကျမတို့က ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသည်။ အိမ်တွင် စားစရာ မရှိလျှင် နေပါစေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူကြမည်ဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်ကို မွေးမြူနိုင်ကြသည်။
ကျမတို့သည် ကျမတို့ထက် မြင့်မြတ်သည်ဟု ယုံကြည်၍ သံဃာတော်များကို လေးစားစွာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်းပင်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဘာသာ၊ သာသနာကို အရှည်တည်တံ့နိုင်စေရန် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုကာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများဖြစ်၍ ယုံကြည်ကိုးစားကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်္ကန်းမြင်လျှင် အလိုလို ခေါင်းငုံ့ဝပ်ကျိုးပြီးသား ဖြစ်သည်။
သို့သော် ကျမသည် ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ခါစ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်ကပင် စတင်၍ သင်္ကန်းခြုံထားသည့် ဘုန်းကြီးအချို့ကြောင့် နယ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့စဉ်က ဘုန်းတော်ကြီးများအား ရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှု ဒီဂရီသည် အနည်းငယ် လျှော့ကျသွားခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံရပေမည်။
ရန်ကုန်သို့ ရောက်လျှင် သင်္ကန်းဝတ်တို့၏ မတင့်တယ်သော မြင်ကွင်းများကို ရွှေတိဂုံစေတီတွင် စတင်မြင်တွေ့ ခဲ့ရသည်။ ကျမ တသက်တာလုံး ရိုသေကိုင်းရှိုင်း ခဲ့ရသည့် သင်္ကန်းဆင်မြန်းသော သံဃာတော်နှင့် အမျိုးသမီးတဦး တို့သည် အလွန်နီးကပ်စွာ ဘေးချင်းကပ် ထိုင်နေသည့် မြင်ကွင်းသည် ကျမအတွက် လွန်စွာ ထူးဆန်းလှသည်။ အလားတူ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိ ကားမှတ်တိုင်တွင် ဘုန်းကြီးနှင့် မိန်းမ ဘေးချင်းကပ်ထိုင်ကာ လူငယ်စုံတွဲများလို စကားတွတ်ထိုးနေသည့် မြင်ကွင်းသည် ကျမအတွက် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်သလို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း ထိုအမြင်မတင့်တယ်သော လုပ်ရပ်ကို တခွန်းတပါဒမျှ ဝင်ရောက်ဟန့်တားခြင်း၊ သတိပေးခြင်း မပြုသည်ကို ပို၍ စိတ်ထိခိုက်မိသည်။ ကျမအနေနှင့်လည်း ပြောရဲသည့် သတ္တိမရှိ။
ကျမတို့ နယ်မှာဆိုလျှင် ထိုသို့ လူမြင်မတင့်တယ်သော အလုပ်ကို လုပ်ပါက ထိုဘုန်းကြီးလည်း လူထွက်ရမည်။ ထိုအမျိုးသမီးလည်း လူတို့၏ ကဲ့ရဲ့ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရမည်။ သို့သော် ရန်ကုန်တွင် ထိုသို့မဟုတ်။ ထိုအကြောင်းကို ရန်ကုန်သား မိတ်ဆွေတယောက်ကို ပြန်ပြောပြတော့ သူက ပြန်ပြောသည်။ “ရန်ကင်းက မိုးကောင်းဘုရားဝင်းထဲမှာဆို အဲလိုတွေအများကြီးပဲ” ဆိုသည့် သူ့စကားကြောင့် ရဟန်းနှင့် မိန်းမ ကြမ်းတပြေးတည်း မထိုင်အပ် ဆိုသော အသိတရားသာ ရှိခဲ့သည့် ကျမသည် ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်ရသည်။
ထပ်၍ ကြုံရသည်က သမ္မတရုပ်ရှင်ရုံ အနီးရှိ ခုံးကျော်တံတားပေါ်မှ ဖိနပ်ပြတ်နေသော ဘုန်းကြီးနှစ်ပါး ဖြစ်သည်။ သူတို့အပါးမှ ဖြစ်သွားသည့် ကျမကို ဖိနပ်ဖိုး အလှူခံသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရာ ကျမ ငွေအနည်းငယ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဖိနပ်တရံစာတော့ မရှိ။ ထို ဘုန်းကြီးများသည် ကျမ၏ နောက်မှ လမ်းသွားလမ်းလာလူများကိုလည်း ဖိနပ်ဖိုး အလှူခံသည်ကို ပြန်ကြည့်၍ မြင်ရသည်။
နောက်နေ့တွင် ထိုဘုန်းကြီးများကို ထိုနေရာ၌ပင် ထပ်၍ တွေ့ပြန်သည်။ သည်တကြိမ်တွင် ဆွမ်းဖိုး အလှူခံသည်။ ကျမက လှူရန် ငွေမပါကြောင်း ပြန်ပြောရာ သာမာန်လူ တယောက်ထက်ပင် ညစ်ညမ်းသော စကားလုံးဖြင့် ဆဲဆိုသည်။ ကွမ်းချိုးများ ကပ်နေသည့် သွားများနှင့် လက်မောင်းတခုလုံးတွင် ဆေးမင်ကြောင် ထိုးထားသော ထိုဘုန်းကြီးများကို ကျမ ကြောက်လန့်ခဲ့ရသည့် ထိုအချိန်ကို ယနေ့တိုင် မှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ လူစည်ကားရာ အရပ်များတွင် ထိုသို့သော ဖိနပ်ပြတ်နေသည့် ဘုန်းကြီးများ၊ ဆွမ်းမစားရသေးသည့် ဘုန်းကြီးများကို မြင်တိုင်း ကျမ ဝေးဝေးမှ ရှောင်ကွင်း၍ သွားမိသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့သည်။
နောက်အတွေ့အကြုံတခုမှာ လူနေတိုက်ခန်းများပေါ်သို့ တက်ချည်ဆင်းချည်ပြုကာ တခန်းချင်းစီ တံခါးခေါက်လျှက် ဝါဆိုသင်္ကန်းအတွက်ဟုဆိုကာ အလှူခံသည့် ဘုန်းကြီးများကြောင့် ဝါတွင်းကာလတိုင်း စိတ်ပျက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သံဃာတော်တို့မည်သည် ထိုသို့ တအိမ်တက်ဆင်း အလှူလိုက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိပါ၏လော။
ရန်ကုန်တွင် မြင်တွေ့ရသည့် ဘုန်းကြီးများသည် သာမာန်လူများကဲ့သို့ပင် ဆေးလိပ်သောက်၍ ကွမ်းစားကာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိုင်ကြသည်။ တီဗီ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အဲယားကွန်း စသည့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများကို သုံးကြသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကျော်ကတည်းက ထိုသို့သော မြင်ကွင်းများသည် ယနေ့တိုင် ရန်ကုန်မြို့တွင် မြင်နေတွေ့နေ ရဆဲဖြစ်ရာ ထိုဘုန်းကြီးများသည်လည်း ပထမ ဘုန်းကြီးတွေလိုပင် တားမြစ်မည့်သူ မရှိကြောင်း ပေါ်လွင်နေသည်။ ကျမငယ်စဉ်က တလျှောက်လုံး အထွဋ်အမြတ်ထားရာ မြတ်သောသင်္ကန်းသည် နေရာမှား၍ ရောက်နေသည့် အဝတ်အထည် တစုံသာဖြစ်ကြောင်း ထိုအဖြစ်အပျက်များက ပေးသည့် သင်ခန်းစာအရ သိခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် ကျမသည် အလုပ်ကိစ္စဖြင့် ချင်းပြည်နယ်သို့ ခေတ္တခဏ ရောက်ခဲ့ဖူးစဉ်က ကြားသိခဲ့ရသည့် အတွေ့အကြုံ တခုကိုလည်း ချန်ထား၍ မရပေ။ ချင်းပြည်နယ်သည် ခရစ်ယာန် ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့် တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်သည့် ပြည်နယ်တခု ဖြစ်သည်။ ကျမကဲ့သို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူမှာ လူနည်းစုဖြစ်သည်။
ချင်းပြည်နယ်တွင် မြေပြန့်မှလာ၍ မူလတန်းပြ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ကျောင်းဆရာမလေး တဦးနှင့် ခင်မင်ခွင့်ရသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မိတ်ဆွေများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မိတ်ဆွေများနှင့်လည်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းပြောဆိုခွင့် ရခဲ့သည်။
ထို့နောက် စကားစပ်ကာ ဘာသာရေး အကြောင်းကို ရောက်သွားသည်။ ထိုဆရာမလေး တာဝန်ကျခဲ့သည့် ရွာသည် မြို့ပေါ်မှ ၇ မိုင်ခန့် လမ်းလျှောက်၍ သွားရသည့် တောင်ပေါ်ရွာလေးတခု ဖြစ်သည်။ ထိုရွာတွင် ကျောင်းထိုင်သည့် ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နှင့် မညီသော တောင်တန်းသာသနာပြု ရဟန်းပျိုတပါး အကြောင်းကို ပြောပြသည်။ ငါးပါးသီလကိုပင် အပြည့်အဝ စောင့်စည်းလိုက်နာနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ထိုရဟန်းအား ရွာသူရွာသားများက ထိုဒေသတွင် သြဇာရှိသည့် ထေရ်ကြီးဝါကြီး သံဃာတော်များအား တိုင်ကြားစာ အကြိမ်ကြိမ်ပို့သော်လည်း ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းမပေးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဘာသာခြားများ အကြားတွင် မျက်နှာငယ်စရာ ဖြစ်နေကြောင်း ပြောပြသည်။
“ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နဲ့ ညီတဲ့ တောင်တန်းဒေသ သာသနာပြု ဘုန်းဘုန်းတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ အဲလိုပဲ သင်္ကန်း ဝတ်ထားပြီး လူလိုနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကြောင့် ဒီက လူတွေက တောင်တန်းသာသနာဖျက်တွေလို့ ခေါ်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့ လူကြီးတွေက ဒီကိစ္စတွေကို သေသေချာချာ စိစစ်သင့်တယ်”ဟု ထိုဆရာမလေးက ပြောသည်။
အလားတူ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ကျောင်းဆရာကြီး တဦးကလည်း ရင်ဖွင့်ပြန်သည်။ ထိုကျောင်းဆရာကြီး၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများသည် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည်။ သူ့မိဘများသည် နတ်ကိုးကွယ်ကြသည်။ သူတို့မိသားစုကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။
“ကျနော်တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဦးဇင်းက ရန်ကုန်က လာတာ။ အိမ်မှာ အမြဲပင့်ပြီး ဆွမ်းကျွေးတယ်။ မိသားစုနဲ့လည်း ခင်နေတယ်။ တနေ့ကျတော့ ကျနော့်အိမ်က တူမနဲ့ အဲဒီဘုန်းကြီး ပက်ပင်းတိုးတယ်။ ကျနော်ဒေါသထွက်တာ တဆတ်ဆတ်တုန်တယ်။ သင်္ကန်းဝတ်ကြီးနဲ့ ဒီလိုမလုပ်ဖို့၊ အိမ်ထောင်ပြုချင်ရင် လူဝတ်လဲဖို့ ကျနော်ပြောတယ်။ နောက်တပတ်ကျတော့ အဲဒီဘုန်းကြီး ကျနော်တို့ရွာက ထွက်ပြေးသွားတယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးပြန်လာရင် ဓားနဲ့ခုတ်မယ်လို့ ကျနော် ကျိန်းထားတယ်”ဟု သူက ပြောပြသည်။
အခြားသော ဘာသာဝင်များအကြား ထိုသို့သော ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသည့် တောင်တန်း သာသနာပြုများကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ သိက္ခာကျဆင်းစေကြောင်း၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့် ကျင့်ကြံနေထိုင်သည့် ဘုန်းတော်ကြီးများအား လူအကြည်အညို ပျက်စေကြောင်း သူက စိတ်တိုလာသည့် အမူအယာဖြင့် ဆက်ပြောပြသည်။
ထို့အတူ သူတို့ဒေသကို လာရောက်ကာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့် NGO တခုမှ မိတ်ဆွေတဦး၏ အကူအညီဖြင့် ကာယကံရှင်များကို အင်တာဗျူးလုပ်ထားသည့် အသံဖိုင်များကို CD ခွေဖြင့် ထည့်ထားသည်ကို ထုတ်ပြသည်။
“ဒီက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးတွေ၊ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို ပညာသင်ပေးမယ်ဆိုပြီး လာခေါ်သွားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ရှိတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ကလေးတွေက စာမသင်ရဘဲ တနေ့ကို ၃၀၀၀ ရအောင် အလှူခံရမယ်ဆိုပြီး ခိုင်းခံနေ ရတယ်။ ပြန်ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေက ပြန်ပြောပြလို့ မိဘတွေက ပြန်သိရတာ။ မိဘတွေက နောက်ကလည်း မလိုက်နိုင်ကြဘူး။ ဒါက ကာယကံရှင်တွေကို အင်တာဗျူး လုပ်ထားတဲ့ အသံဖိုင် မူရင်းခွေ။ အခုက ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတော့ ပိုဆိုးမှာစိုးလို့ ကျနော် ဒါကို မထုတ်သေးတာ။ NGO က အကိုကလည်း မီဒီယာတွေကို ထုတ်မပြသေးနဲ့လို့ မှာထားတယ် ”ဟု ထိုကျောင်းဆရာကြီးက ဆိုသည်။
ထိုစကားများကို ကြားရသော ကျမသည် ကိုယ့်နားကိုပင် ကိုယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ရသည်။ ကြက်သေသေသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ကို ထိုအချိန်တွင် ကျမ ပြည့်ပြည်ဝဝ နားလည်ခဲ့သည်။ ကျမတွင် ပြောစရာ စကားမရှိ။ သို့သော် တချိန်တွင် ထိုအကြောင်းကို ဖွင့်ချရမည်၊ ဘာသာ သာသနာကို ညှိုးနွမ်းစေသည့် ထိုသင်္ကန်းဝတ်များ အကြောင်းကို တနေ့တွင် စာပြန်ရေးကာ တိုက်ဖျက်ရမည်ဆိုသည့် အတွေးဖြင့် တေးထားခဲ့သည်။ စာဖြင့် ရေးမပြနိုင်သည့်တိုင် ဘာသာရေးတွင် သြဇာအာဏာရှိသည့် ထေရ်ကြီးဝါကြီး သံဃာတော်များထံသို့ စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ လျှောက်ထားရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦး ပီသစွာ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က မြန်မာပြည်အတွင်း ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခများ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ထိုအကြောင်းကို စာမရေးခဲ့။ အစမဖော်ခဲ့။ ရေငုံနှုတ်ပိတ် နေခဲ့သည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကို လိပ်ပြာမလုံ။ အမှားလုပ်နေသည့်သူကို ထောက်မပြ၊ မဖယ်ရှားနိုင်သည့်တိုင် ကိုယ့်အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်မည်စိုး၍ ထိန်ချန်ထားရသည်ကို စိတ်မသန့်ခဲ့ပေ။ သာသနာညှိုးနွမ်းအောင် လုပ်ဆောင်နေသူများကို မြင်တွေ့ကြားသိရပါလျှက် မသိဟန်၊ မမြင်ဟန်ဆောင်၍ နှုတ်ပိတ်နေခြင်းသည် အပြစ်ကျူးလွန်နေသူများထက် ပို၍အပြစ်ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။
ယခုရက်ပိုင်းတွင် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများထံမှ အများဆုံး ကြားရသည့် စကားလုံးမှာ “ဘုန်းကြီးမြင်တိုင်း မကြည်ညိုတော့ဘူး” ဆိုသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက လူကြီးသူမများ၏ ဆုံးမပဲ့ပြင်မှုကြောင့် ဘာသာတရားကို လေးစားသည့်၊ ငါးပါးသီလကို တတ်နိုင်သရွှေ့ ထိန်းသိမ်းခဲ့သည့် ကျမ၏ ခံစားချက်သည် ယခု ထိုမိတ်ဆွေများ၏ ခံစားချက်နှင့် တထပ်တည်း ဖြစ်နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွက်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အမှန်ကို လမ်းပြပေးရန် တာဝန်ရှိသည့်၊ သာမာန်လူများ မကျင့်ကြံနိုင်သည့် လောကုတ္တရာ အကျင့်မြတ်များကို ဘုရားဟော တရားတော်နှင့်အညီ နေထိုင်ကျင့်ကြံရန် တာဝန်ယူထားသည်ဟုဆိုသော ဘုန်းတော်ကြီးတပါးက ကမ္ဘာတဝှမ်းကပင် ကြားသိရလောက်အောင်ပင် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော စကားတို့ဖြင့် လူလယ်ခေါင်တွင် ဆဲရေးပြုခဲ့သည်။
ကျမတို့လို သာမာန်လူအဖို့ပင် ထိုမျှယုတ်မာရိုင်းစိုင်းသော စကားလုံးများဖြင့် ဆဲဆိုရန် လွယ်ကူသည့် ကိစ္စဟုတ်ရာ၊ ကျမတို့ ရိုသေလေးမြတ်သည့် သင်္ကန်းဝတ်တဦးက ထိုသို့ ပြုမူခြင်းအတွက် လွန်စွာရှက်မိသည်။ လွန်စွာ ဝမ်းနည်းမိသည်။
ပို၍ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရသည်မှာ ထိုသင်္ကန်းဝတ်အား “မှန်ပါသည်၊ ထောက်ခံပါသည်၊ အားပေးပါသည်”ဟု ဆိုနေသည့် လူဝတ်ကြောင်များ၏ မြှောက်ပင့်ပြောဆိုသည့် စကားများကို ကြားရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများကို ဖျက်ဆီးသမှုပြုနေသည့် ထိုလူဝတ်ကြောင်များကို လွန်စွာအံ့သြ ရွံရှာမိလေသည်။
တဆက်တည်းတွင် ထိုသို့ သာသနာကို ညှိုနွမ်းစေသည့် လုပ်ရပ်အတွက် ဘုရားဟော တရားတော်နှင့်အညီ ကျင့်ကြံနေထိုင်သည့် ဆရာတော်၊ သံဃာတော်ကြီးများက ခေါ်ယူဆုံးမခြင်း၊ အရေးပေါ် သံဃာ့အစည်းအဝေး ခေါ်ယူကာ ထိုကိစ္စအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်သည်။
သို့သော် ယနေ့မနက်တွင် မီဒီယာအသီးသီးတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည့် သတင်းတို့ကို ဖတ်မိခြင်းကြောင့် ကျမလွန်စွာ စိတ်ထိခိုက် နာကျင်မိသည်။ ကမ္ဘာသိအောင် အယုတ္တအနတ္တ ဆဲဆိုခဲ့သည့် ထိုသင်္ကန်းဝတ်အား “တိုင်ကြားမည့်သူ မရှိ၍ အရေးမယူနိုင်ကြောင်း” မဟာသံဃာ့နာယက အဖွဲ့က ဖြေကြားသည့် သတင်းဖြစ်သည်။
ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးများသည် မိမိတို့ မလုပ်နိုင်သော သာသနာ စည်ပင်ထွန်းကားရေး၊ သာသနာတော် သန့်ရှင်းရေးများကို လုပ်ဆောင်ရန် တာဝန်ယူထားသည့် ရဟန်းသံဃာတော်များကို စားဦးစားဖျား အမွန်အမြတ် ဆွမ်းခဲဘောစဉ် များကို လှူတန်းကြသည်။ အရိပ်ကိုပင် မနင်းမိအောင် ရှောင်ကျဉ်၍ ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြသည်။ ဘုရားဟော တရားတော်နှင့်အညီ စိတ်ချမ်းသာစွာ ကျင့်ကြံနေထိုင်ရန် လွန်စွာကြီးကျယ် ခမ်းနားသော၊ လွန်စွာခမ်းနား ထည်ဝါသော ကျောင်းသင်္ခန်းများကို လှူဒါန်းကြသည်။ ယုတ်စွအဆုံး လူတကိုယ်စာပင် မနည်းတိုးဝှေ့ကာ စီးနင်းနေရသော ဘတ်စ်ကားများပေါ်၌ပင်လျှင် သံဃာတော်များအတွက် သီးသန့်နေရာထိုင်ခင်းကို လှူတန်းကြ ပေသည်။
သို့သော် သင်္ကန်းဝတ်တဦး၏ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တို့ကို မထောက်ထား မငဲ့ကွက်ပဲ သာမာန်လူတို့ထက်ပင် သိမ်ဖျင်းသည့် ဆဲရေးသမှု ပြုခြင်းကို လူတို့ကလည်း ထောက်ခံကြသည်၊ အားကိုးအားထားရာ ထေရ်ကြီးဝါကြီး သံဃာတော်များကလည်း မသိကျိုးကျွံပြုနေလျှင် ကျမတို့ မည်သူ့ကို ဆက်၍ အားကိုးရမည်နည်း။ ကျမတို့ သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းအောင် ပြုမှုနေသည့် ရဟန်းတု၊ ရဟန်းယောင်များကို မည်သူက သန့်ရှင်းပေးမည်နည်း။ ပစ္စည်းလေးပါး ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမများက တာဝန်ကျေပွန်ကြသော်လည်း၊ သာသနာ့ဝန်တာကို ထမ်းရွက်ရန် တာဝန်ယူထားသည့် ရဟန်းများဘက်က တာဝန်မကျေလျှင် ပရိနိမ္ဗာန်ပြုသွားပြီဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က သဘောကျလိမ့်မည်ဟု ကျမတော့ နည်းနည်းမှ မထင်ပေ။
မာတုကာမဟုခေါ်သည့် မိန်းမများနှင့် မတင့်တယ်သည့် အပြုမူများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် သင်္ကန်းဝတ်များ၊ ရန်ကုန်မြို့၏ လူစည်ကားရာ အရပ်များတွင် တွေ့ရသည့် ဖိနပ်ပြတ် ကိုယ်တော်များ၊ ဆွမ်းမစားရသေးသည့် ကိုယ်တော်များ၊ တောင်တန်းသာသနာဖျက်ဟု နာမည်တပ်ခံနေရသော သင်္ကန်းဝတ်များသည် ကျမတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ဆွမ်းဆန်ထဲတွင် ရောနေသည့် ကြွက်ချေးများသာ ဖြစ်သည်။ ကြွက်ချေးများလာမှာ စိုးပါသည်။ ယခင်က သံဃာတော်များနှင့် ဘာသာတရားကို ကြည်ညိုစိတ် ဒီဂရီ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာရခြင်း တရားခံများဟု စွပ်စွဲရပေလိမ့်မည်။
ယခုဆိုလျှင် ဘုရား၏ သားတော်တပါးဆိုသူက ကမ္ဘာသိအောင် ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲရေးပြုခဲ့သည့် ရက်မှာ လက်ချိုး ရေတွက်ရသည်။ ယခုချိန်အထိ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ အမှားကို ထောက်ပြသည့် သံဃာတော်များ ပေါ်ထွက်မလာသေး။ ဘာသာ၊ သာသနာတော်ကို ညှိုးနွမ်းစေမည့်သူများ၏ ညောင်စေ့လောက်ရှိသော လုပ်ရပ်များမှသည် ညောင်ပင်ကြီးအထိ ကြီးထွားကာ ဝါးမြိုသွားသည့် အဆင့်အထိ မရောက်စေရန် ကာကွယ် စောင့်ထိန်းမည့် သာသနာ့ အာဇာနည်များ မကြာမီ အမြန်ဆုံး ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ယုံကြည်မိသည်။ အမြန်ဆုံး ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ လေးနက်စွာ ဆုတောင်းမိသည်။
ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မှားမှားမှန်မှန် ဝေဖန်ထောက်ပြသံ ဆိတ်သုဉ်းနေသည့် တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ ကျမတို့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်သည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်သည် ထိုသို့သော အခြေအနေကို ကျေနပ်နိုင်မည် ထင်ပါသလားဟု ကျမကိုယ်ကျမ မေးခွန်းထုတ်မိ၍ ဤစာကို ရေးမိခြင်း ဖြစ်လေသည်။
မူရင်း http://burma.irrawaddy.org ပါ အထက်ပါဖေါ်ပြချက်ကို Myanmar Muslim Media က ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
January 24, 2015 at 1:25 pm | Reply
ဘုရားပါ သူ့အမှု့ထဲဆွဲထည့်နေပြီ ဖျာ ဖျာ ………
မိမိ၏ မွန်မြတ်သည့်စေတနာကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင်နားလည်ခွင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟု ဦးဝီရသူမိန့်
ဇန်န၀ါရီ ၂၂ ၊ ၂၀၁၅
မြတ်စွာဘုရားရှင် ရှိနေလျှင်ပင် မိမိ၏ မွန်မြတ်သည့်စေတနာဖြင့် ကုလသံအမတ်ကို ဖာသည်မဟု ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆိုမှုအား ခွင့်လွတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားကြောင်း မြန်မာပို့စ်ဂလိုဘယ်သတင်းဂျာနယ်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
“…ဦးဇင်းက ကိုယ့်တုိုင်းပြည်လူမျိုးကို ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပဲ ရင့်ရင့်သီးသီးပြောလုိုက်တာပါ။ဦးဇင်းရဲ့ စေတနာမွန်မြတ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရှိရင် ဦးဇင်းကို ခွင့်လွတ်နားလည်ပေးလိမ့်မယ်”ဟု မဘသ ဦးဆောင်ဆရာတော် ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားကြောင်း မြန်မာပုို့စ်ဂလုိုဘယ် သတင်းဂျာနယ်တွင်ဖေါ်ပြထားသည်။။
ကုလအထူးသံအမတ် မစ္စယန်ဟီးလီအား ဖာသည်မဟုတစ်ဖုံ၊ကုလားကိုဖင်ပေးလိုက်ဟုတစ်သွယ် အမျိုးမျိုးဆဲရေးတုိုင်းထွာခဲ့သည့် နိင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြု ဗုဒ္ဓသားတော် ဦးဝီရသူသည် မိမိပြောကြားချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး တစ်စုံတစ်ရာဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် မိမိလုပ်ရပ်မှန်ကန်ကြောင်း မီဒီယာများသို့အစဉ်တစ်စိုက်ဖြေကြားလျှက်ရှိသည်။
ကိုရီးယားနိင်ငံသူ ကုလအထူးသံအမတ် မစ္စယန်ဟီးလီအား ဖာသည်မဟု သုံးနှုန်းခြင်းသည်ပင်လျှင် ထုိုစကားလုံးထက်ကြမ်းတမ်းသည့်စကားလုံးမရှိသဖြင့်သုံးနှုန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်နိင်လျှင် ထိုစကားလုံးထက်ပြင်းထန်သည့်စကားလုံးသုံးနှုန်းလိုပြီး ယခုကဲသုို့သောအသုံးအနှုန်းဖြင့်ဆဲဆိုရခြင်းကိုပင်အားရကျေနပ်မှုမရှိဟု ဦးဝီရသူက မိန့်ကြားကြောင်း ဇန်န၀ါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ်7Day Daily သတင်းစာတွင်ဖေါ်ပြထားသည်။
ကိုးကား။ ။ မြန်မာပို့စ်ဂလုိုဘယ် သတင်းဂျာနယ်၊ အမှတ် (၁၉၅) အချပ်ပို(ခ)၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်။
January 25, 2015 at 8:21 am | Reply
“လူတောင် အဲ့လိုမပြောရဘူး။ ရဟန်းတစ်ပါးဟာဆိုရင် ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံကို သီလနဲ့ စောင့်ရှောက် ခြံရံနေတာကို သံဃာလို့ခေါ်တယ်။ ဒါကိုမှ မထိန်းနိုင်ရင်တော့ ရဟန်းလို့ မခေါ်ဘူး။ လူရဲ့နှုတ်ကတောင် မပြောသင့်တာကို ထင်ရှားတဲ့ရဟန်းက ဖြစ်နေတော့ မသင့်လျော်ဘူး” ဟု ရွှေညဝါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟက မိန့်ကြားသည်။
သိမ်မွေ့သောဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မပြောဆိုသင့်ဟု အစ္စလာမ်ဓမ္မဗိမာန်တော် ဆော်သြရေးမှူး ဟာဂျီဦးအေးလွင်က ပြောသည်။
ဦးဝီရသူ၏ ပြောဆိုချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မြန်မာအစိုးရအပါအဝင် သံဃဥသျှောင်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့သည် ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ် ကြာချိန်အထိ တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်၊ ဖြေရှင်းမှု မရှိသေးပေ။
January 25, 2015 at 11:10 am | Reply
ကျွန်တော် ဦးဝီရသူ ဘာတွေ ပြောနေသည်ကို စိတ်မဝင်စားပါ။ သေချာတာတစ်ခုက ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်ခံယူထားသလို ဘာတစ်ခုမျှပိုမလာကြောင်း သူကောင်းစွာ သက်သေပြသွားခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင် ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်ကို ဘာမှန်းမသိမီ တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲလာပြီး What is Buddhism ? ဆိုကာ ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းစွာ ရှင်းပြသွားနိုင်သူမှာ သဲကုန်း သပိတ်အိုင်ဆရာတော်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကို လေးစားပါသည်။ ကြည်ညိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့လို ကောင်တွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိဘဲ မယုံနဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကို ဘာမှန်းမသိဘဲ မယုံဘူးလို့ မပြောနဲ့ဆိုကာ သွန်သင်သွားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် လွတ်လပ်စွာ ဆဲရေးဆိုခွင့်ရှိ သည် ဆိုသည့်အကြောင်းတော့ တစ်လုံးမျှ ပြောမသွားခဲ့ပါ။ ပြောလျှင်လည်း ကျွန်တော်ယုံကြည်မည် မဟုတ်ပါ။
စာရေးဆရာ ထင်လင်းဦး အပြောရိုင်းသည်ဆိုပြီး တရားစွဲခံရသည်။ လက်ထိပ်ခတ်သည်၊ ရုံးထုတ်သည်၊ ကံဆောင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် တောင်းပန်လိုက်ရသည်။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာအရကြည့်လျှင် အချိုးနှိမ်ခံလိုက်ရခြင်း၊ ပဲ့ကြွေသွားခြင်း၊ ဆုံးရှုံးသွားခြင်းတစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ ရိုင်းသည်ဟုဆိုကာ အတင်းရှိခိုးတောင်းပန်ခိုင်းသူများ ရိုင်းစိုင်းသည့်အခါတွင် မည်သူ့ကိုမျှ တောင်းပန်စရာမလိုဆိုသည့် သဘောတရား အယူအဆမျိုးကို ဗုဒ္ဓက ဟောကြားခဲ့မည်တော့မထင်ပါ။ ကျွန်တော်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ကောင်းစွာ မသိသေးသူဖြစ်သဖြင့် နားလည်သူများ ထောက်ပြစေချင်ပါသည်။
ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓကို လက်ခံသည်မှာ မေတ္တာရှင်၊ ကရုဏာရှင်၊ စေတနာရှင်၊ သတ္တဝါများအကျိုးကိုသာကြည့်ပြီး လူသားတို့အတွက် ငြိမ်းချမ်းစေမည့် မေတ္တာစကားတို့ကိုသာ ဟောကြားတော်မူတ⁠တ်သောအရှင်ဖြစ်သော ကြောင့်ပင်။ အကယ်၍သာ ဗုဒ္ဓသည် ဦးဝီရသူကဲ့သို့ ပြောဆိုတတ်သူမျိုးဖြစ်လျှင် ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာဟု အမည်ခံချင်မည် မထင်ပါ။